ကျွန်တော်နဲ့ ဂေဇက် ပတ်သက်ခဲ့သမျှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော်နဲ့ ဂေဇက် ပတ်သက်ခဲ့သမျှ
ကျွန်တော်နဲ့ ဂေဇက် ပတ်သက်ခဲ့သမျှ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Feb 17, 2012 in Creative Writing | 35 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက်နေ့က “တယ်ညံ့သကိုး” ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးနဲ့ ကျွန်တော် ဂေဇက်မှာ စတင် ခြေချခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ခြေချဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီငယ်လည်းဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့၊ ဂေဇက်ရဲ့ မန်ဘာတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ BigDefender ရဲ့ ဆွဲခေါ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အစ ပထမတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဂေဇက်မှာ စာတွေ ရေးပြီး တင်ခဲ့ပေမယ့် ရေးပြီး တင်တယ် ဆိုရုံလောက် အနေအထားပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အန်တီဆူး ပြောသလို ဂေဇက်မှာ ပို့စ်တင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်တစ်ကွက်ရပြီ ဆိုနိုင်ပေမယ့် အဲဒီမြေကွက်မှာ ကျွန်တော် ခဏတဖြုတ် ဝင်နားသွားတယ် ဆိုရုံလောက်ပါပဲ။ အဲဒီထက် မပိုခဲ့ပါဘူး။ တကယ့် ရွာသားစစ်စစ် တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တာဟာ တစ်လကျော်ကျော်၊ နှစ်လဝန်းကျင်လောက်သာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီလို ရွာသားစစ်စစ် တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အောက်က ကွန်မန့်လေးကြောင့်ပါပဲ။
ဒီရွာမှာ နေရတာ ဗဟုသုတတွေလည်း ရတယ်၊ ပျော်လည်း ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော် ဂေဇက်ကို ချစ်တယ်။
အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ရွာထဲမှာ အနေများလာခဲ့ပါတယ်။ ရွာထဲက လူတွေကိုလည်း သိကျွမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဆြာသစ်၊ ကိုပေ၊ ကိုဂီ၊ ကိုဘလက်၊ ဖရဲ၊ မအိတုံ၊ တီချာကြီး၊ အန်တီ ပဒုမ္မာ စတဲ့ စတဲ့ လူတွေနဲ့ သိခွင့် ရလာခဲ့တာလည်း ကိုပေါက်ဖော် ကြောင့်လို့ ပြောရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး။
ရွာထဲမှာ အနေများလာခဲ့တဲ့အလျောက် ထုံးစံအတိုင်း ရောဂါ ရလာခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ရွာထဲကို တစ်နေ့ မဝင်ရ မနေနိုင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွာထဲက စာတွေကို နေ့တိုင်း ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးပြီး တင်ခဲ့တယ်။ မန့်လည်း မန့်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော် ရွာထဲမှာ တင်ခဲ့တာဟာ အခုပို့စ် မပါရင် ပို့စ်ပေါင်း (၅၁) ပုဒ် ရှိခဲ့ပါပြီ။ အောက်က ပို့စ်တွေပါပဲ။
၁။ တယ်ညံ့သကိုး ….
၂။ ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရသော ကြပ်တစ္ဆေတို့၏ အသံများ
၃။ ထိုလူရွယ် နှစ်ယောက်
၄။ amazon တောအတွင်း လူရိုင်း မျိုးနွယ်စုများကို satellite မှ တွေ့ရှိ
၅။ ကမ္ဘာ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် (၂၅) မျိုး – အပိုင်း (၁)
၆။ ကမ္ဘာ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် (၂၅) မျိုး – အပိုင်း (၂)
၇။ အိပ်ရာဝင် တံခါးခေါက်သံ
၈။ ” စစ် ” … ၏ အဓိပ္ပါယ်
၉။ တဖြည်းဖြည်း အရပ်ရှည်လာသော သရဲကြီး
၁၀။ သြကာသ ရှင်းတမ်း
၁၁။ ဘီလူး သုံးမြွှာပူး
၁၂။ Blog ရေးသားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
၁၃။ စံထူးနှင့် ဖိုးသူတော်
၁၄။ Online Video များအား Free Download ချနိုင်သည့် Website များ
၁၅။ ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး စံချိန်ရှင်များ
၁၆။ ထူးဆန်းသည့် အဆောက်အအုံများ
၁၇။ ယိုသူ မရှက်၊ မြင်သူ ရှက်
၁၈။ ဟိုးထား သကြားမင်း
၁၉။ ကမ္ဘာ့ လျှာအရှည်ဆုံး မိန်းမ
၂၀။ ကမ္ဘာကျော်ကြား ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ
၂၁။ မောင်ကောင်းလက်မှတ်ပါ ငွေ ၁၀၀ တန်ကို နှစ်သိန်းပေးဝယ်
၂၂။ အဆိုးရွားဆုံး အင်တာနက် Password (၂၅) မျိုး
၂၃။ ၅၅ ပေ ရှည်တဲ့ မြွေကြီး
၂၄။ Google ၏ Search Features များ
၂၅။ Google’s “Let It Snow”
၂၆။ Steve Jobs ၏ ရုပ်တု
၂၇။ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ တစ်ညတာ
၂၈။ 2011 အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ
၂၉။ 2011 အတွင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့သူများ (၁)
၃၀။ “လွတ်လပ်ရေးနေ့” အား ဂုဏ်ပြုပါ၏ ။
၃၁။ ဤ ပုံကိုကြည့် ၍ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ရေးပါ
၃၂။ ဒု … သ … န … သော
၃၃။ အမေသို့တမ်းချင်း …………
၃၄။ တစ်နှစ်ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
၃၅။ ရေတစ်ဇွန်းနဲ့ ဖုန်းကို ၁၀ နာရီကြာအောင် သုံးနိုင်မယ့် ကိရိယာ
၃၆။ လက်တွေ့နှင့် ယုံကြည်ခြင်း
၃၇။ သူကြီးသို့ … ( MG ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ )
၃၈။ အမှောင်နှင့် အလင်း
၃၉။ မြန်မာ ရှေးဟောင်း သတင်းစာများ (၁)
၄၀။ မြန်မာ ရှေးဟောင်း သတင်းစာများ (၂)
၄၁။ WordPress နဲ့ Blog တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း
၄၂။ ကမ္ဘာ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် (၂၅) မျိုး – အပိုင်း (၃)
၄၃။ ကမ္ဘာ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် (၂၅) မျိုး – အပိုင်း (၄)
၄၄။ ဓာတ်ပုံထဲက သရဲမ
၄၅။ သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနှင့် အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း
၄၆။ လွယ်ကူစွမ်းထက် ပီယဆေးတစ်လက်
၄၇။ မိန်းကလေးတွေကို ဝီစီမှုတ်ခိုင်းမယ် … တဲ့
၄၈။ ချိန်ခွင်လျှာ (ကဗျာ)
၄၉။ အင်တာနက်ပေါ်က သူများရဲ့ပုံတွေကို တင်ချင်ရင်
၅၀။ တိုတိုပေါက်ပေါက်အတွက် လက်ချောင်
၅၁။ ဖုတ် (သရဲ) ဝင်ပူးခံရသူ
အဲဒီ ပို့စ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော် အကြွေး ကျန်နေတဲ့ ပို့စ်တွေကတော့ ” 2011 အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ ” ဆိုတဲ့ Listing ကောက်ယူတဲ့ ပို့စ်နဲ့ “မြန်မာ ရှေးဟောင်း သတင်းစာများ” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ” 2011 အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ ” ကို တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ “မြန်မာ ရှေးဟောင်း သတင်းစာများ” ကတော့ နောက်မှ ထပ်တင်ပါမယ် ခင်ဗျာ။
2011 အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ ဆိုပြီး ဒီနေရာက ရွာသူားတွေရဲ့ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ၁၂ လတာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းက အမှတ်တရ ဖြစ်စေခဲ့တာလေးတွေကို လစ်စ် ကောက်ယူခဲ့ရာမှာ ကျွန်တော် အပါအဝင် (၂၅) ဦးတို့ရဲ့ အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ရေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒါလေးတွေကို သိမ်းထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ အခုလည်း အပြည့်အစုံ ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
2011 အတွင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့သူများ
ကျွန်တော် အံစာတုံး အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အမှတ်တရ ဖြစ်စရာကတော့ …….
မပွတ်ရှ် ကလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း သူ့ရဲ့ ထူးခြားမှုလေးကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ် …..
ကိုဂီ ကတော့ အခုလို ပြောခဲ့ပါတယ် …..
Small Cat ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အင်တာနက်ကြီး အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ အကြောင်းကို အခုလို ပြောသွားခဲ့ပါတယ် …..
ကိုသက်နိုင်ဦး ကလည်း သူ့မျက်လုံး ပုလင်းဖင် ဖြစ်သွားခဲတဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဆိုတာကို …..
မမှီ ကလည်း သက်သေခံလေးတစ်ယောက် ထပ်တိုးခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို …..
Rain Pricess ကလည်း ဂေဇက်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို …..
ကိုပေ ကလည်း အခုလိုလေး ပြောခဲ့တယ် …..
မသဲနုအေး ကလည်း ဂေဇက် ရောဂါ ရခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကို …..
ကိုပေါက်ဖော် ကလည်း …..
ဂျော်နီအောင်ပု ကလည်း …..
တောတွင်းပျော် ကလည်း ကံကောင်းနဲ့ ကံဆိုး တစ်ရက်တည်း ကြုံခဲ့ရတဲ့ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကို …..
ကြီးလတ် ကတော့ အခုလို ပြောသွားခဲ့ပါတယ် …..
နီကီတာ ကလည်း အခုလို ပြောသွားခဲ့တယ် …..
သဂျီးဦးခိုင် ကလည်း ကဗျာဆန်ဆန်လေး ပြောသွားခဲ့သေးတယ် …..
မိုးဇက် ကလည်း အခုလိုလေး ပြောသွားခဲ့တယ် …..
ကိုပေါက် (မန္တလေး) ကလည်း နဂို ရှိပြီးသားပိုး ထက်ပြီး ဝါရင့်သွားတဲ့ အကြောင်းကို အခုလို …..
ကိုကင်း ကလည်း …..
Nature ကလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ် …..
KoAung ကလည်း အခုလိုလေး ပြောသွားခဲ့သေးတယ် …..
ရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့ လူ ဆိုသူကလည်း ၂၀၁၁ အတွင်း သူ ရေးတတ်၊ ချစ်တတ်သွားတဲ့ အကြောင်းကို
မောင်သန်းထွဋ်ဦး ကလည်း အခုလို …..
အန်တီ ပဒုမ္မာ ကလည်း မိတ်သစ်၊ ဆွေသစ်တွေနဲ့ ပေါင်းဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဟာ ၂၀၁၁ ပါတဲ့ …..
Aungnng87 ကလည်း အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ် …..
တီချာကြီး TTNU ကလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းက အမှတ်တရ အဖြစ်လေးတွေကို အခုလို ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ် …..
ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၇) ရက်နေ့ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ထူးခြားတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲ။ ဒီနေ့ ဒီနေရာမှာ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဂေဇက်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်ဖြစ်ခဲ့ပုံ အကျဉ်းလေးနဲ့တကွ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းက ဒီရွာသားအချို့ရဲ့ အမှတ်တရ စကားများကို နှစ်ပို့စ် တစ်ပို့စ် ပေါင်းပြီး တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အားလုံးသော ရွာသူားအပေါင်း ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလျှက် ……
အမစာ ဖတ်မိလိုက်တာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျား
Listing ပြန်ဖတ်မိမှ ခင်စရာကောင်းတဲ့လူတစ်ချို့ လဲ ရွာထဲမ၀င်နိုင်ကြတာ သတိထားမိတယ်
တစ်ချို့ ကြတော့ ရုံးက ဂေဇက်ကို ပိတ်ထားလို့မ၀င်နိုင်ကြတာပါ..(အဲဒီရုံးကလူတွေကို တစ်နေ့ မီးဒုတ်နဲ့ ရှိ့ ဖို့စဉ်းစားနေတယ်)
Attraction အပြည့်နဲ့ရွာကြီးပါဗျို့ …
ကျနော်ဆို ပျော်လို့ မျက်လုံးမညောင်း ဇက်ကြောမတက်မချင်း တစ်နေကုန် ထိုင်ဖတ်နေတာပဲ.ကွိ..ကွိ..
အပြင်က အဆင်မပြေတာလေးတွေတောင် ရွာထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်.
အချိန်ရရင် ကိုယ့်ဆရာတို့ ….လာလည်ကြစေချင်ပါတယ်ဗျား..
ရမ်းသမ်းကြော်ငြာပေးနေတာ.သဂျီး ဆာဗာလဲ အားနာပါ၏..
အီးပါချင်လို့ ပြေးလိုက်ဦးမယ် အမရေ
မာမီပေါက် အချိန်ကုန်သက်သာအောင် diaper
ပါကင်လိုက် လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ လာယူပေးမလား
အဒိ diaper ဆိုတာ တော်တော်မူးလားဟင်
Moe Z ရေ မြန်မြန်ပြောလိုက်ဦးနော် ..
မာမီပေါက်က တစ်ဆိတ်ရှိ သူ့ဟာကြီးပဲ မျက်စိထဲ ပြေးပြေးမြင်တာ ….
အဲ … သူ့ဟာကြီး ဆိုတာ ဟိုဟာကို ပြောတာ … ဟိုဟာ ဟုတ်ဖူး …
ဟိုအမူးသမားကြီးရဲ့ ဒုံးကျည်နဲ့ဆော်ထည့်လိုက်ဦးမယ်.အေးဆေးနေ
အဲဒီ ရောဂါက အတော် ကုရခက်မဲ့ ရောဂါဗျ။
ကျုပ်ကတော့ အခု လက်တွေ့ပဲ …
ရွာတံခါးမှူးဦးဘလက်က သူ့ကိုကျော်လုပ်သွားလို့ တင်းနေဒယ်။။ မာဆက်ခေါ်သွားပြီး အကျောလျှော့ပေးလိုက်ပါအုံး…။ တော်ကြာနေ လူတွေ့ရင် ထိုးလားပြုလား လုပ်နေမှဖြင့်..။
ဦးဘလက် က ဘာကို တင်းတာတုန်းဗျ။
ဦးကြောင် ပြောတာ ကျုပ်ကိုလား။
အံစာတုံး ပို့စ်မှာ ကျွန်တော် တင်းစရာ ဘာတစ်ခုမှ မပါပါကြောင်း
ကျွန်တော်များ ဘာတွေ အရေးမှားသွားတာလဲလို့ … ။
ကျေးဇူး ဦးဘလက် …
ခင်ဗျား ဆရာကြီး ၀င်မလုပ်ပါနဲ့ 
ဆရာကြီး ကို တော့ မလုပ်ပါဘူးကွယ်
ကိုပေ ငရဲကြီးမယ်နော် …
ဆရာကြီးကို လုပ်ဘူးဆိုတော့ ….
ဆရာလေးကို …. :O
အယ် … ကျုပ် တွေးတတ်တော့ဘူး …..
အံစာတုံးရေ၊ ရွာချစ်သူတစ်ဦး အနေနဲ့ အမျိုးတွေ့ရင် အရမ်းဝမ်းသာသဗျာ။
ကိုကြီးအံလည်း ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
နောက်ထပ် စာတွေရေးဖို့တော့ မပူပါနဲ့ ။ ရေးကို ရေးဦးမှာပါ။
ဖရဲ တောင်းပေးတဲ့ ဆုနဲ့လည်း ပြည့်ရပါစေလို့ … ။
ရွာထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၁၂ မှာ ဘွဲ့တွေ တသီကြီးခေတ်စားလာတာပဲ။
ခေတ်မှီအောင် ကိုယ့်နာမည်တောင် အရှည်ကြီး ပြန်မှည့်ရမလို ဖြစ်နေပြီ
မဟာအနန္တ စကြဝဠာအာကာသ မဟာရာဂျာရာဇာ အံစာတုံးအုတ်နီခဲ ရေ……………………..
မမ လုပ်လိုက်မှပဲ ကိုယ့်ဘွဲ့ကို ထပ်ပြီး အရှည်ကြီး ဆွဲဆန့်လို့ရတာ သိတော့ဒယ် …
မမလည်း သားတို့ကို အားကျရင် အောက်က ဦးဘလက် ပေးတဲ့ နာမည် ပြောင်းလိုက်ပါလား။
“မြသန္တာ ဝင်းဝင်းခိုင် ကလျာ မမမောင်” … တဲ့ .. ဟီဟိ
အဲဒါဆို ကျွန်တော် မမ ကို နာမည်ပေးလိုက်မယ်။
မြသန္တာဝင်းဝင်းခိုင် ကလျာ မမမောင်
ရှဲရှဲပါ သဂျီး ခင်ဗျာ …
ဟိုက်လစာ တိုးတောင်းနေပီ ကိုစိန်ပေါက်ပေါက်နော်။ဝံဂျီးက ကန့် ကွက်တယ်တဲ့ဗျ။စောင့်အုံးနော်။
ကိုအံစာတုံးရေ…..ကိုယ့်ကွန်မန့် ပြန်ဖတ်ရတော့ တမျိုးကြီးဗျ။
ဟဲ…ကိုယ့်ကောမန့်လေးပြန်မြင်ရတော့ မျက်ရည်ဝိုင်းသွားသလိုဘဲ..Herat ထိတယ်ဆိုတာဒါမျိုးနေမှာ…
ဟက်ထိ ရုံမို့ …
တော်ကြာ ဟက်အတက် ဖြစ်သွားမှဖြင့် ကျုပ် အမှုပတ်နေပါဦးမယ် .. ကလူ .. ကလူ ..
နောက်တာနော် … ကျေးဇူးပါ …
~~~ ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၇) ရက်နေ့ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ထူးခြားတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲ။ ~~~
အနီးစပ်ဆုံးတွေး ကြည့်မိတာက မင်း မွေး နေ့ များလား။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်လေး ဖြစ်ပါစေ။
ဒီနေ့ မှ စ၍ နေချင်သည့် နှစ် တိုင်အောင် အလိုရှိအပ်၊ တောင့်တအပ် သော၊ မြင့်မြတ်သော ဆန္ဒများ အားလုံး ပြည့်ဝပါစေ။
မိဘ ကို မငြိုမငြင် နဲ့ မွေးကျေးဇူး ဆပ်ချင်တဲ့၊ ဆပ်နိုင်တဲ့ သားလိမ္မာ ဖြစ်ပါစေ။
တစ်ချိန်မှာ မိသားစု၊ အိမ်သူ နဲ့ သားသမီး များ အတွက် ဖခင်ကောင်း ဖြစ်လာပါစေ။
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နဲ့ ပြည့်ဝ ကာ အောင်မြင် ခြင်း အပေါင်း သရဖူ ဆောင်းနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ။
PS – ကိုးနတ်ရှင်ကိုလည်း ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်သလို ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ။
အရီးလတ် ထင်တာနဲ့ ကွက်တိပါပဲဗျာ ..
ဒါကြောင့် ပညာရှိတွေများ တွေးကြည့်ရင် ပြေးကြည့်တာထက် မှန်တယ်လို့ ဆိုတာနေမှာ …
အဟုတ်ပါပဲ ဒီနေ့က ကျွန်တော့် မွေးနေ့ပါခင်ဗျာ …
အရီးလတ် ပေးတဲ့ ဆုတွေနဲ့လည်း ပြည့်ပါစေလို့ …
” ပညာရှိ”??? ဟီဟိ
ကလူ …. ကလူ …. ကလူ …. (လိပ်ပြာလွင့် သွား လို့ ပြန်ခေါ်တာ။)
ခေါင်းကုတ် ပြီး စဉ်းစားနေ၏။
ဒါထက် ကိုရှုံး တစ်ယောက် ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်။
ဟိုးအရင် အရီးဝင်စ က အရီး ရွာထဲဝင်တဲ့ အချိန် သူလဲ ဝင်တယ်။
အားရင် ပြန်လာပါဦး ကိုရှုံးရေ့။